PDR mama taabụ Nsukka - China PDR mama taabụ orylọ ọrụ & Ndị na-eweta ya
4PCS Aluminium Glue Puller Taabụ
Nkebi nke: BT211018
Ọ nwere uru nke ịrụ ọrụ dị mfe, rụzie nkụkpọ maka gị ozugbo. Nchedo gburugburu ebe obibi ma ọ naghị emebi agba mbụ. Nnọchi na taabụ na dị iche iche shapes n'ihi na otutu nzube.
6pcs Puller Tabs Aluminium Na-adọba Tabs PDR Metal Taabụ Maka Car Isi Pụrụ Iche Ihicha Mmezi
Nkebi nke: BT211017
18PCS Taịlị Taịlị ga-eme ka Mgbapụta Na-adọta Taịbu Isi Isi Dent Remover Ngwá Ọrụ Gluel Puller Setịpụrụ Taabụ
Nkebi nke: BT211016
Nke a set nke 18pcs puller tabs ka na ukwuu inogide plastic na siri ike ewu, gburugburu ebe obibi-echebe. Ọ bụ ọkachamara e mere na nha dị iche iche maka obere mgbanaka dị na ụgbọala, friji, ọgba tum tum, na igwe igwe, wdg.
19PCS PDR Glue Tabs Auto Isi Dent Mmezi Ngwá Ọrụ Na-adọta Tab
Nkebi nke: BT211015
1. Ọsọ ma dịkwa mfe ịrụkwa ụdị obere dents niile dị iche iche.
2. Họrọ taabụ gluu dị iche iche dị iche iche maka dents dị iche iche.
3. Mezie nsị ahụ zere imebi agba mbụ.
4. Inogide na-adịgide adịgide na iji ike axial na-enye ohere ka akụrụngwa dị elu.
5. Enwere ike iji ya n'ụgbọala, friji, ahụrụ moto, na igwe igwe, wdg.
Ọ bụ ọkachamara e mere dị iche iche nha maka dị iche iche obere mgbịrịgba na ụgbọala, friji, ọgba tum tum ahụ, na igwe na-asacha, wdg N'ihi uru nke ọrụ dị mfe, ọ kwesịrị ka onye ọ bụla rụọ ọrụ na slide hama, dent lifter or ọ bụla ndị ọzọ na-adọkpụ ngwaọrụ, na ịrụkwa nkụkpọ na-ezere imebi agba mbụ.
120PCS PDR Mgbaji Mgbaaka Car Isi Mmezi Ngwa gluu na-adọba Tab
Nkebi nke:: BT211014
Professional ọkwa nkụkpọ Anam Udeme tabs maka autos.
56PCS PDR Taịlulu Taịlị
Nkebi nke: BT211013
Nke a set of 56pcs puller tabs ka na ukwuu inogide plastic na siri ike ewu, gburugburu ebe obibi-echebe. Ọ bụ ọkachamara e mere dị iche iche nha maka dị iche iche obere mgbịrịgba na ụgbọala, friji, ọgba tum tum ahụ, na igwe na-asacha, wdg N'ihi uru nke ọrụ dị mfe, ọ kwesịrị ka onye ọ bụla rụọ ọrụ na slide hama, dent lifter or ọ bụla ndị ọzọ na-adọkpụ ngwaọrụ, na ịrụkwa nkụkpọ na-ezere imebi agba mbụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke ọ bụla nke 56PCS Glue Tab Tab Ma ọ bụ chọọ ịkọwa usoro iwu omenala, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-atụ anya na ị ga-enwe mmekọrịta azụmaahịa na ndị ahịa ọhụụ gburugburu ụwa n'ọdịnihu dị nso.